Olee otú iji tọghata 8MM ka DVD Format on Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
Olee otú iji tọghata 8mm camcorder etere ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata 8mm camcorder etere ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Isiokwu a tumadi na-akụzi gị otú iji tọghata 8mm camcorder etere ka DVD maka ndabere.
8mm etere degrade karịrị oge na gị video echeta nọ n'ihe ize ndụ. 8mm etere-amalite nwere kwesiri ngosi umuihe mgbe naanị 5 afọ otú ndabere 8mm etere site n'ịtụgharị ka dijitalụ.
The DVD bụ dijitalụ na ike ga-depụtaghachiri enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ. N'adịghị ka a 8mm teepu, DVD adịghị nwere na-rewound na ị nwere ike mfe ekiri ọkacha mmasị gị ezinụlọ na-echeta n'elu na n'elu. Plus, DVD na-elu-erughị ohere karịa 8mm etere otú i nwere ọtụtụ ụlọ n'ihi na ihe ezinụlọ video echeta. E nweghị ihe ijuanya mere ọtụtụ ndị ga-n'anya ka a oyiri nke ha 8mm etere on DVD maka mfe ele azụ n'oge ọ bụla.
Iji tọghata 8mm camcorder etere ka DVD na efu àgwà ọnwụ, ebe a anyị nwere ike ikwu a 8MM ka DVD burner - Wondershare DVD Creator (Windows 8 na-akwado), iji enyere gị aka imeri dijitalụ video ka DVD akakabarede mgbe 8mm teepu na-converted dijitalụ. Mbụ, i kwesịrị nyefee 8mm etere gị na kọmputa (i nwere ike ịmụta otú ime ya na Part 1). Ọ bụrụ na faịlụ na-ama na kọmputa, ị nwere ike na-tọghata ha ka ha DVD, e gosiri na Part 2.
Part 1. Nyefee 8mm etere gị na kọmputa
Part 2. Olee otú iji tọghata 8MM ka DVD
E nwere ọtụtụ ụzọ weghara vidiyo si na 8mm etere na kọmputa, dị ka kpọọ kaadị ma ọ bụ dijitalụ camcorder. Ihe mbụ na-achọ mmezi ngwaike na a ngwa ngwa iji kọmputa. Ma ọ bụrụ na ị nwere Digital8 camcorder ma ọ bụ a dijitalụ camcorder na analọg gabiga ma ọ bụ kpọọ ikike, i nwere ike iji camcorder iji tọghata analọg mgbaàmà na-na-ada nke nwere ike weghaara a na kọmputa. N'okpuru ebe a bụ n'ozuzu iji tọghata analọg mgbaàmà na dijitalụ mgbaàmà nke a pụrụ weghaara na video akada software ma onye na-abịa na gị kpọọ kaadị, VirtualDub (Free) ma ọ bụ ọkacha mmasị gị software.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị 8mm teepu isi iyi (camcorder ma ọ bụ ọkpụkpọ), gị kpọọ kaadị na kọmputa ma ọ bụ dijitalụ camcorder (ugbua jikọọ kọmputa) iji Firewire, USB cable, ma ọ bụ S-video USB.
Nzọụkwụ 2. Gbaa ndị video akada software na kọmputa.
Nzọụkwụ 3. Fanye 8mm teepu n'ime 8mm teepu camcorder ma ọ bụ ọkpụkpọ, na-ahụ ntụpọ na teepu ebe ị chọrọ na-amalite akada usoro.
Nzọụkwụ 4. Họrọ ma "Nhọrọ" ma ọ bụ "Mwube" na video-akada software ma jide n'aka na mmepụta format, nke nwekwara ike kpọrọ "kpọọ format," bụ MPEG-2 n'ihi na ọ bụ ihe kasị mma maka ọkụ DVD.
Nzọụkwụ 5. Họrọ "Capture" na video-akada software ma họrọ "Play" na 8mm teepu camcorder ma ọ bụ ọkpụkpọ. Mgbe ọ na-rụchara, footage si 8mm etere ga-abụ na kọmputa ike mbanye.
Atụmatụ na iji weghara 8mm teepu video
1. Ọ bụghị ihe niile ọhụrụ dijitalụ camcorders mkpa anabata analọg ọsọ ọsọ (mma na-ekiri na ala-ọgwụgwụ ụdị).
2. Tupu akada, ngwa-ngwa-atụ 8mm teepu na njedebe nke teepu na mgbe ahụ weghachi azụ mmalite tupu na-akpọ. Nke a ga-ekwe ka ire ụtọ playback mgbe akada video.
3. Ọ bụrụ na gị isi iyi ngwaọrụ nwere S-Video mmepụta, jide n'aka na ị na-eji na kama mejupụtara (RCA) video mmepụta. S-Video anapụta a mma foto mma karịa ọtụtụ ihe mejupụtara video.
4. Jide n'aka na ị na-ezuru ohere na draịvụ ike gị.
5. Mụta ihe banyere 8mm teepu video kpọọ.
Mgbe 8mm teepu weghaara na kọmputa, a DVD Onye Okike a chọrọ iji ọkụ video ka DVD maka play na ihe ọ bụla standalone DVD ọkpụkpọ. Wondershare DVD Creator Ukwuu tụrụ aro. Ma Windows na Mac na nsụgharị ndị dị. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac-agba ọsọ Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6, na-Wondershare DVD Creator for Mac. Nzọụkwụ iji tọghata 8mm ka DVD na Windows (Windows 10 gụnyere) na Mac ndị fọrọ nke nta otu, dị nnọọ na-nri version dị ka gị na kọmputa na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ tọghata 8mm ka DVD.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na ẹkedori 8MM ka DVD burner
Mgbe nbudata, biko wụnye na mgbe ahụ ẹkedori ya. The n'okpuru interface bụ ihe ị banyere ịhụ:
Nzọụkwụ 2. Ibu Ibu videos na dezie ha
Pịa "Import" ka ịgbakwunye videos gị mkpa n'ime usoro ihe omume. N'oge usoro, ị nwere ike hazie gị vidiyo site trimming, cropping, n'ịgbanwe videos, na-agbakwunye watermarks, edezi DVD menu na na.
Nzọụkwụ 3. Preview na Ọkụ 8MM ka DVD
Atụmatụ: The ekpe ohere nke diski ẹwụtde ke diski ohere mmanya na ala; Ị nwere ike họrọ size nke na-ere ọkụ DVD n'etiti "DVD-R4.5G" na "DVD-R9.0G"; Mmepụta àgwà bụkwa ruo gị oke, ị pụrụ họrọ "kwesịrị ekwesị diski", "Ọkọlọtọ video àgwà" ma ọ bụ "High video àgwà".
Na ọrụ Wondershare DVD Creator (Windows 8 na-akwado), ị ga-ahụ ya mara mma mfe iji tọghata 8mm faịlụ ka dvd mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ a àgwà oge-ekiri ihe nkiri gị na ezinụlọ gị n'ụlọ.
Banyere 8MM: 8mm camcorders iji obere video cassette na a aba akpọ oge na ubé mma ụda karịa VHS. The 8mm video format ezo mberede atọ yiri videocassette formats maka NTSC na PAL / SECAM telivishọn usoro. Ndị a bụ ndị mbụ Video8 (analọg) Ọkpụkpọ na ya mma nọchiri Hi8 (ma analọg na dijitalụ), nakwa dị ka a ọzọ na-adịbeghị anya dijitalụ format maara dị ka Digital8.
Olee otú iji tọghata TiVo na na Movies ka DVD